ဒူဒူကြီး: November 2011
"Class Change သို့မဟုတ် Classification Society အဖွဲ့အစည်းတခုမှ၊ နှစ်သက်ရာ အခြား Classification Society အဖွဲ့အစည်းတခုခုသို့ ပြောင်းလဲအပ်နှံခြင်း"
International Sea Voyage အနေနဲ့၊ နိုင်ငံတကာ ကုန်သွယ်ရေကြောင်းမှာ၊ သွားလာခုတ်မောင်းနေတဲ့ သဘေ်ာတွေကို၊ Owner သဘေ်ာပိုင်ရှင် ဒါမှမဟုတ် Managers လို့ခေါါတဲ့၊ သဘေ်ာကိုစီမံခန့်ခွဲသူတွေ အခြေချနေထိုင်ရာ၊ တိုင်းပြည်မှ၊ သက်ဆိုင်ရာ National Administration သို့မဟုတ် Authority လို့ခေါါတဲ့ Flag State အာဏာပိုင် အဖွဲ့ အစည်းတွေမှာ၊ registration မှတ်ပုံတင်ရပါတယ်။ မှတ်ပုံတင်ဖို့အတွက်၊ Classification နဲ့ Statutory လို့ခေါါတဲ့ Standardization အဆင့်အတန်းသတ်မှတ်ခြင်း၊ ပြုလုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် standardization ရှိမှသာ၊ registration ကိုဆောင်ရွက်နိုင်တယ်လို့၊ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
Lloyd's Register, Bureau Veritas (BV), American Bureau of Shipping (ABS), Det Norske Veritas (DNV), Germanischer Lloyd (GL) နဲ့ Nippon Kaiji Kyokai (ClassNK) အစရှိတဲ့၊ အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ International Classification Societies အဖွဲ့ အစည်းတွေဟာ၊ classification နဲ့ statutory ဆိုင်ရာ ကိစ္စတွေကို၊ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းပြည်ရဲ့ National Administration သို့မဟုတ် Authority ကိုယ်စားဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။
Coastal နဲ့ Home Trade Voyage လောက်သာ၊ သွားလာခုတ်မောင်းနေတဲ့ သဘေ်ာတွေ ကိုတော့ National Administration ဆိုတဲ့၊ Flag State အာဏာပိုင်အဖွဲ့ အစည်းကသာ၊ Classification နဲ့ Statutory ဆိုင်ရာ ကိစ္စတွေကို၊ ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ အနီးဆုံးကမ်းခြေမှ၊ (၁၂) မိုင်ထက်မဝေးသလို၊ ဆိပ်ကမ်း ခရီးတခုနဲ့တခု မိုင် (၅၀၀) ထက်မပိုတဲ့၊ voyages တွေကိုသွားလာနေတဲ့ သဘေ်ာတွေဟာ၊ Coastal နဲ့ Home trade voyage သွားလာနေတဲ့ သဘေ်ာတွေဖြစ်ပါတယ်။
International Sea Voyage အနေနဲ့၊ နိုင်ငံတကာ ကုန်သွယ်ရေကြောင်းမှာ၊ သွားလာခုတ်မောင်းနေတဲ့ သဘေ်ာတွေကို၊ စတင်တည်ဆောက်ကတည်းက နှစ်သက်ရာ Classification Society အဖွဲ့အစည်း တခုခု ကို၊ အပ်နှံကာ Classification နဲ့ Statutory ဆိုင်ရာ Survey & Inspection စစ်ဆေးခြင်းကိစ္စတွေ ကိုဆောင်ရွက်ရပါတယ်။ သဘေ်ာကို တည်ဆောက်ပြီး International Sea Voyage တွေမှာ၊ အသုံးပြုကာပြေးဆွဲတဲ့ အခါမှာလည်း၊ Owners နဲ့ Managers တို့ နှစ်သက်ရာ Classification Society အဖွဲ့အစည်း တခုခုကို၊ အပ်နှံကာ Class Annual Survey, Class Intermediate Survey, Class Renewal Survey နဲ့ Class Occasional Survey အစရှိတဲ့၊ Classification နဲ့ Statutory ဆိုင်ရာ Survey & Inspection စစ်ဆေးခြင်း ကိစ္စတွေကို၊ ပုံမှန်နဲ့ လိုအပ်သလို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရပါတယ်။
တခါတရံမှာတော့ လက်ရှိအပ်နှံထားတဲ့၊ Classification Society အဖွဲ့အစည်းတခုမှ၊ နှစ်သက်ရာ အခြား Classification Society အဖွဲ့အစည်းတခုခုကို၊ ပြောင်းလဲအပ်နှံလေ့ရှိသလို၊ တခါတရံမှာ National Administration ဆိုတဲ့၊ Flag State အာဏာပိုင်အဖွဲ့ အစည်းတွေမှ၊ ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့၊ Classification နဲ့ Statutory ဆိုင်ရာကိစ္စတွေကို၊ Classification Society အဖွဲ့အစည်းတခုခုကို၊ ပြောင်းလဲအပ်နှံလေ့လည်း ရှိပါတယ်။
ဒီနေရာမှာတော့ Classification Society အဖွဲ့အစည်းတခုမှ၊ နှစ်သက်ရာ အခြား Classification Society အဖွဲ့အစည်း တခုခုကို၊ ပြောင်းလဲအပ်နှံတဲ့အခါ၊ ဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စတွေနဲ့ National Administration ဆိုတဲ့၊ Flag State အာဏာပိုင်အဖွဲ့ အစည်းတွေမှ၊ ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့၊ Classification နဲ့ Statutory ဆိုင်ရာကိစ္စတွေကို၊ Classification Society အဖွဲ့အစည်းတခုခုကို၊ ပြောင်းလဲအပ်နှံတဲ့အခါ၊ ဆောင်ရွက် ရမယ့်ကိစ္စတွေကို၊ ဖော်ပြထားပါတယ်။
Posted by ကိုထွန်း at 04:05 No comments:
BNWAS ဆိုတဲ့၊ Bridge Navigational Watch Alarm System
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရေကြောင်းအဖွဲ့ IMO မှ၊ အသစ်ဖြည့်စွက်ပြဌာန်းတဲ့၊ Resolution တွေဟာ၊ စတင်ရေးဆွဲပြီးချိန်မှ၊ (၁၀) နှစ်နီးပါး ကာလလောက် ကြာမှသာ၊ နိုင်ငံတကာက လိုက်နာကျင့်သုံးပြီး၊ အသက်ဝင်လေ့ ရှိပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ မကြာခင်တတ်ဆင်အသုံးပြုရတော့မယ့် BNWAS ဆိုတဲ့၊ Bridge Navigational Watch Alarm System တနည်းအားဖြင့် Dead Man Alarm လေးအကြောင်း ကို၊ ဖော်ပြ ပါ့မယ်။
IMO ရဲ့ MSC - Marine Safety Committee မှ၊ Bridge Navigational Watch Alarm System တတ်ဆင် အသုံးပြုဖို့ IMO Resolution MCS.128 (75) ကို၊ မေလ (၂၀) ရက်နေ့ (၂၀၀၂) ခုနှစ်မှာ ပြဌာန်းခဲ့ပါတယ်။
SOLAS Regulation, Chapter V, Regulation 19 ကို၊ ဇွန်လ (၁၂) ရက်နေ့၊ (၂၀၀၉) ခုနှစ်မှာ၊ IMO Resolution MSC. 282 (86) နဲ့ အစားထိုးပြင်ဆင်ခဲ့ ပါတယ်။ အစားထိုးပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့ SOLAS Regulation, Chapter V - Regulation 19.2.2.3 အရ ခရီးသည်တင်သဘေ်ာ Passenger Ships အားလုံးနဲ့၊ တန်ချိန် ၁၅၀ အထက် ကုန်တင်သဘေ်ာ Cargo Ships အားလုံးမှာ၊ တတ်ဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဇူလိုင်လ (၁) ရက်နေ့ (၂၀၁၁) ခုနှစ်နဲ့ ဇူလိုင်လ (၁) ရက်နေ့ (၂၀၁၁) ခုနှစ်နောက်ပိုင်း၊ တည်ဆောက်မယ့် ခရီးသည်တင်သဘေ်ာ Passenger Ships အားလုံးမှာ၊ စတင်တည်ဆောက်ကတည်းက တတ်ဆင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဇူလိုင်လ (၁) ရက်နေ့ (၂၀၁၁) ခုနှစ်၊ မတိုင်မှီတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ ခရီးသည်တင်သဘေ်ာတွေမှာတော့၊ ဇူလိုင်လ (၁) ရက်နေ့ (၂၀၁၂) ခုနှစ် မတိုင်မှာတတ်ဆင်ဖို့လိုအပ်ပြီး၊ ဇူလိုင်လ (၁) ရက်နေ့ (၂၀၁၂) ခုနှစ် နောက်ပိုင်းဆောင်ရွက်ရမယ့် Annual Survey (သို့မဟုတ်) Intermediate Survey (သို့မဟုတ်) Class Renewal Survey လို့ခေါါတဲ့ Special Survey ရဲ့ Safety Radio Survey ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ထည့်သွင်းစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဇူလိုင်လ (၁) ရက်နေ့ (၂၀၁၁) ခုနှစ်နဲ့ ဇူလိုင်လ (၁) ရက်နေ့ (၂၀၁၁) ခုနှစ်နောက်ပိုင်း၊ တည်ဆောက်မယ့် GRT ၁၅၀ မက်ထရစ်တန်အထက်၊ ကုန်တင်သဘေ်ာ Cargo Ships အားလုံးမှာ၊ စတင်တည်ဆောက် ကတည်းက တတ်ဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဇူလိုင်လ (၁) ရက်နေ့ (၂၀၁၁) ခုနှစ်၊ မတိုင်မှီတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ GRT ၁၅၀ အထက်နဲ့ GRT ၅၀၀ မက်ထရစ်တန်အောက် ကုန်တင်သဘေ်ာ Cargo Ships တွေမှာတော့၊ ဇူလိုင်လ (၁) ရက်နေ့ (၂၀၁၄) ခုနှစ် မတိုင်မှာတတ်ဆင်ဖို့လိုအပ်ပြီး၊ ဇူလိုင်လ (၁) ရက်နေ့ (၂၀၁၄) ခုနှစ် နောက်ပိုင်းဆောင်ရွက်ရမယ့် Annual Survey (သို့မဟုတ်) Intermediate Survey (သို့မဟုတ်) Class Renewal Survey လို့ခေါါတဲ့ Special Survey ရဲ့ Safety Radio Survey ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ထည့်သွင်းစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဇူလိုင်လ (၁) ရက်နေ့ (၂၀၁၁) ခုနှစ်၊ မတိုင်မှီတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ GRT ၅၀၀ အထက်နဲ့ GRT ၃၀၀၀ မက်ထရစ်တန်အောက် ကုန်တင်သဘေ်ာ Cargo Ships တွေမှာတော့၊ ဇူလိုင်လ (၁) ရက်နေ့ (၂၀၁၃) ခုနှစ် မတိုင်မှာတတ်ဆင်ဖို့လိုအပ်ပြီး၊ ဇူလိုင်လ (၁) ရက်နေ့ (၂၀၁၃) ခုနှစ် နောက်ပိုင်းဆောင်ရွက်မယ့် Annual Survey (သို့မဟုတ်) Intermediate Survey (သို့မဟုတ်) Class Renewal Survey လို့ခေါါတဲ့ Special Survey ရဲ့ Safety Radio Survey ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ထည့်သွင်းစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဇူလိုင်လ (၁) ရက်နေ့ (၂၀၁၁) ခုနှစ်၊ မတိုင်မှီတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ GRT ၃၀၀၀ နဲ့ အထက်၊ ကုန်တင်သဘေ်ာ Cargo Ships တွေမှာတော့၊ ဇူလိုင်လ (၁) ရက်နေ့ (၂၀၁၂) ခုနှစ် မတိုင်မှာတတ်ဆင်ဖို့လိုအပ်ပြီး၊ ဇူလိုင်လ (၁) ရက်နေ့ (၂၀၁၂) ခုနှစ် နောက်ပိုင်းဆောင်ရွက်မယ့် Annual Survey (သို့မဟုတ်) Intermediate Survey (သို့မဟုတ်) Class Renewal Survey လို့ခေါါတဲ့ Special Survey ရဲ့ Safety Radio Survey ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ထည့်သွင်းစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Bridge Navigational Watch Alarm System (BNWAS) ဆိုတာဟာ၊ UMS Class ဆိုတဲ့ Unattended Machinery Space စနစ်ကို အသုံးပြုတတ်ဆင်ထားတဲ့ သဘေ်ာတွေနဲ့ အခြားသဘေ်ာတွေရဲ့ စက်ခန်း Engine Room မှာ၊ တတ်ဆင်ထားတဲ့ Engineer Call Alarm လို၊ Alarm System တမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ စက်ခန်း Engine Room မှာ မောင်းနှင်လည်ပတ်နေတဲ့ စက်ကရိယာ machinery တခုခုဟာ၊ ပုံမှန် အခြေအနေမှာ မရှိရင် engine room alarm & monitoring system မှာ အချက်ပေးပါတယ်။ alarm ကို acknowledged မလုပ်တဲ့အခါ၊ time Limit တခုအတွင်း မှာ engineer call alarm အဖြစ်ကူးပြောင်းသွား ပြီး၊ သဘေ်ာတစီးလုံးကို အသိပေးအကြောင်းကြားပါတယ်။
ပင်လယ်ပြင်မှာမောင်းနှင်ခုတ်မောင်းနေစဉ်၊ Deck Officers လို့ခေါါတဲ့ ကုန်းပတ်အရာရှိတွေဟာ၊ Navigator အဖြစ် Navigation Watch ကိုလည်း အလှည့်ကျတာဝန်ယူရပါတယ်။ Navigation Watch ယူစဉ် Gyro-compass, GPS, AIS, Navtax, Radar, ECDIS အစရှိတဲ့၊ အစရှိတဲ့ အီလက်ထရောနစ် ဆိုင်ရာ ရေကြောင်းလမ်းပြ ကရိယာတွေနဲ့၊ ချိတ်ဆက်ပြီး၊ သဘေ်ာကိုမောင်းနှင်ရသလို၊ Hospital Alarm, Refrigeration Chamber Alarm, Cargo Hold Smoke Detector Alarm, Water Ingress System Alarm, Bow thruster Compartment Bilge Level Alarm, Pump Room Bilge Level Alarm အစရှိတဲ့ Alarm တွေအပြင် အခြားသော Alarm and Monitoring System တွေကိုလည်း၊ စောင့်ကြည့်ရပါတယ်။
ပင်လယ်ပြင်မှာမောင်းနှင်ခုတ်မောင်းရင်း၊ Navigation Watch ကိုယူနေစဉ်၊ အကြောင်းတစုံတခုကြောင့် Bridge သို့မဟုတ် Wheel House မှာမရှိခဲ့ပဲ၊ ပျက်ကွက်ခဲ့တဲ့အခါ၊ သိနိုင်ဖို့၊ BNWAS - Bridge Navigational Watch Alarm System ကို၊ တတ်ဆင်ဖို့ပြဌာန်းတာဖြစ်ပြီး၊ BNWAS အတွက်တတ်ဆင်အသုံးပြုမယ့် စက်ပစ္စည်းကရိယာတွေဟာ၊ SOLAS Regulation, Chapter V, Regulation 18.2 (Approval, surveys and performance standards of navigational systems and equipment and voyage data recorder) နဲ့ ကိုက်ညီရမယ်လို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
တွေ့ခဲ့ဖူးတဲ့ BNWAS မှာတော့၊ Bridge သို့မဟုတ် Wheel House တတ်ဆင်ထားတဲ့၊ alarm sensor မှ IR - infrared ray သို့မဟုတ် အနီအောက်ရောင်ခြည်လို့ခေါါတဲ့၊ electromagnetic radiation wave ကို ထုတ်လွှင့်ကာ၊ Navigator ရှိမရှိ၊ စောင့်ကြည့်နေပါတယ်။ အဲဒီ sensor ကို hybrid Passive Infrared (PIR) သို့မဟုတ် active microwave motion detector sensors လို့လည်းခေါါနိုင်ပါတယ်။ sensor အနေနဲ့ Navigator မရှိဘူးလို့ယူဆတဲ့အခါမှာ၊ alarm ကို activated ဖြစ်စေပြီး၊ BNWAS အနေနဲ့ အချက်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Image credit to : http://www.bridge-inspector.com/, www.navgard.com
Posted by ကိုထွန်း at 19:24 No comments:
Basic Ship Theory Volume 1 နဲ့ Volume 2
K.J. Rawson M.Sc, DEng, FEng, RCNC, FRINA, WhSch နဲ့ E.C. Tupper B.Sc, CEng, RCNC, FRINA, WhSch တို့ရေးပြီး၊ Butterworth-Heinemann, Linacre House, Jordan Hill, Oxford မှ၊ ထုတ်တဲ့ 'Basic Ship Theory' စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ Volume 1 နဲ့ Volume2ဆိုပြီး၊ အပိုင်း (၂) ပိုင်း ပါဝင်ပါတယ်။ ။
Volume 1 မှာ၊ Hydrostatic and Strength ဆိုပြီး၊ Chapter (၉) ခုပါဝင်ကာ၊ ဒီနေရာမှ ရယူနိုင်ပါတယ်။
Volume2မှာတော့၊ Ship Dynamics & Design ဆိုပြီး၊ Chapter (၇) ခုပါဝင်ကာ၊ ဒီနေရာမှ ရယူနိုင်ပါတယ်။
Posted by ဒူဒူကြီး at 20:46 No comments:
"GUIDE TO SHIP REPAIR ESTIMATES"
"GUIDE TO SHIP REPAIR ESTIMATES" ဆိုတဲ့၊ စာအုပ်ကို၊ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Don Butler ရေးသားပြီး၊ Butterworth-Heinemann, Linacre House, Jordan Hill, Oxford မှ၊ ထုတ်ဝေပါတယ်။
သဘေ်ာတွေကို သဘေ်ာကျင်းမှာလွန်းတင်ပြင်ဆင်တဲ့အခါ၊ ပြုလုပ်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေ အတွက်၊ ရေးသားထားတဲ့ စာအုပ်ဖြစ်ပြီး၊ စီမံခန့်ခွဲမှုပိုင်းကို၊ တာဝန်ယူရတဲ့ "Superintendents" တွေရဲ့၊ ကိုးကားစာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာ မှတဆင့် ရယူနိုင်ပါတယ်။
Remark : All publications and images herein this website are for use of educational purpose only. The owner of this web site is not responsible for the consequences.
Posted by ဒူဒူကြီး at 19:59 No comments:
Workplace Safety & Health (WSH) Manual for the Marine Industries
တကယ်တော့၊ သဘေ်ာကျင်းဆိုတာဟာ၊ စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေ၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွေလိုပဲ၊ အချိန် မရွေး ထိခိုက်ဒါဏ်ရာရပြီး၊ အသက်အန္တရာယ်ဆုံးရှုံးစေနိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ် အဖြစ်အများ ဆုံး၊ နေရာတခုဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေဖို့၊ work place safety & health regulations တွေကို ပြဌာန်းထားသလို၊ အတိအကျ လိုက်နာကျင့်သုံးဖို့၊ လိုပါတယ်။
ဒီစာအုပ်ကလေး ကတော့ Workplace Safety & Health (WSH) Manual for the Marine Industries ဆိုတဲ့၊ စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ စက်ာပူက သဘေ်ာကျင်းတွေမှာ၊ ကျင့်သုံးလိုက်နာဖို့ The Association of Singapore Marine Industries (ASMI) နဲ့ Workplace Safety and Health (WSH) Council တို့မှ၊ ထုတ်ဝေထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Posted by ကိုထွန်း at 03:34 No comments:
အင်းစိန် G.T.I တုန်းက၊ Industrial Electronics သင်ပေးခဲ့တဲ့၊ ဆရာမနဲ့ Facebook မှာ၊ တွေ့တဲ့အခါ၊ အတွေ့ အကြုံထဲက၊ အကြောင်းတွေကို အခြေခံပြီးရေးဖို့၊ အကြံပေးတဲ့အတွက်၊ ဒီ post လေးကိုရေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ post လေးမှာ၊ ကြုံဖူးတဲ့ Transmission gear box နဲ့ Air Clutch အကြောင်းလေးကိုဖော်ပြ ပါ့မယ်။ Air clutch ဆိုတာကို၊ (၁၉၃၆) ခုနှစ်မှာ၊ Thomas Fawick ဆိုသူက၊ စတင်တီထွင်ခဲ့တာဖြစ် ပါတယ်။
Direct coupling အနေနဲ့မသုံးပဲ၊ Clutch ကိုထည့်သွင်းတတ်ဆင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့၊ primer mover ရဲ့ out put ကို၊ လိုအပ်တဲ့အခါ clutch ကို၊ engage လုပ်ပြီးရယူဖို့နဲ့၊ မလိုအပ်တဲ့အခါ dis-engage လုပ်နိုင်ဖို့ဖြစ် ပါတယ်။
Fig. Generator with Clutch
တခါက၊ Medium speed4stroke, 1200 KW engine မှတဆင့်၊ Reduction gear box ခံပြီး၊ Pumps တွေ ကိုမောင်းတဲ့ system မှာ၊ Air clutch ကို သုံးထားတာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီလို Air clutch တွေကိုသုံးပြီး၊ Transmission gear box မှတဆင့် Generator တွေကိုလည်းမောင်းလေ့ရှိပါတယ်။ Generator တွေကို၊ transmission gear နဲ့ အသုံးပြုတဲ့အခါ၊ gear box မှာ၊ thrust force ကိုရစေဖို့၊ Thrust Roller Bering အုပ်စုမှ၊ cylinder bore - cylindrical roller bearing တွေကို အသုံးပြုပါတယ်။ Rooling Bearings အကြောင်းကိုတော့၊ ဒီနေရာမှာ ပြန်ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
Fig. Prime mover's fly wheel, intermediate shaft, plumber block and gear box input clutch assembly
Fig. Cargo pump transmission gear box
prime mover နဲ့ gear box ကို၊ intermediate shaft နဲ့ဆက်သွယ်တဲ့အခါ၊ plumber block မှာ၊ tapered bore - cylindrical roller bearing တွေကို အသုံးပြုပါတယ်။ အလားတူပဲ၊ pumps တွေ ကိုမောင်းနှင်ဖို့၊ transmission gear box ကိုထည့်သွင်းတတ်ဆင်တဲ့အခါ၊ Thrust Roller Bering အုပ်စုမှ၊ cylinder bore နဲ့ tapered bore cylindrical roller bearing တွေကို အသုံးပြုပါတယ်။ Bearing နံပါတ်မှာ၊ (2) ဆိုတဲ့ ဂဏန်းနဲ့ စတဲ့ Rooling bearings တွေဟာ၊ Thrust Roller Bearings တွေဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ကြုံခဲ့ရတာကတော့၊ cylindrical roller bearing ရဲ့၊ bearing cone ကွဲသွားပြီး၊ အစအနတွေ gear box ထဲကျကာ၊ gear teeth တွေ ပဲ့ထွက်ကုန်သလို၊ defected bearing ကြောင့်၊ shaft ဟာလည်း mis-alignment ဖြစ်သွားပြီး၊ shaft seal ပါ၊ leak ဖြစ်ကာ၊ gear lubricating oil တွေ leakage ယိုကျလာ ပါတယ်။ bearing cone ကွဲသွားတဲ့ အထိ၊ defected ဖြစ်တဲ့အတွက်၊ root of cause ကိုရှာကြည့်ရ ပါတော့တယ်။ vibration ကြောင့် ဖြစ်နိုင်သလို၊ mis-alignment ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Fig. Gear box input shaft alignment
Gear box ရဲ့ input နဲ့ out put shaft တွေကို၊ dial gauge သုံးပြီး alignment စစ်ဆေးကြည့်တဲ့ အခါ၊ primer mover ဖြစ်တဲ့ engine fly wheel နဲ့ gear box ကြားမှ intermediate shaft ဟာ mis-alignment ဖြစ်နေတာ၊ တွေ့ရပါတယ်။ intermediate shaft ကို၊ secured ဖမ်းထားတဲ့ plumber block ဟာနေရာရွေ့သွားတဲ့အတွက် mis-alignment ဖြစ်ပေါါရတာဖြစ်ပါတယ်။
Fig. Crankshaft deflection
Fig. Dial gauge position
Torsional vibration ကြောင့်၊ mis-alignment ဖြစ်ပေါါရတာလို့ယူဆပြီး၊ primer mover ဖြစ်တဲ့ engine ကိုပါ စစ်ဆေးရပါတော့တယ်။ engine ရဲ့ crank case doors တွေကိုဖွင့်ပြီး၊ crank shaft ရဲ့ crank pin unit တခုခြင်း ကို၊ dial gauge ကိုသုံးပြီး၊ crank shaft deflection ယူကြည့်တဲ့အခါ၊ ရရှိလာတဲ့ readings တွေဟာ၊ allowable limit အတွင်းမှာရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
Fig. Crankshaft thrust pad measurement
Fly wheel အနီးမှ No.6unit crank pin နဲ့ No.7main bearing cap ကြားမှ၊ thrust pad ရဲ့ clearance ကို တိုင်းကြည့်တဲ့အခါ၊ 0.86 mm လောက် clearance ရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ thrust pad အနေနဲ့ 0.86 mm ဆိုတာ၊ အတော့်ကို ကြီးမားတဲ့ clearance ဖြစ်ပြီး၊ crank shaft မှတဆင့် torsional vibration ကိုဖြစ်ပေါါစေတဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်း root of cause ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Transmission gear box ရဲ့ power ဟာ2x 250 KW ရှိပြီး၊ pump (၂) လုံးကိုမောင်းဖို့၊ clutch (၂) စုံ နဲ့ အတူ၊ out put shaft (၂) ချောင်းတတ်ဆင်ထားပါ တယ်။ Gear ratio အနေနဲ့ 1 : 1.818 ရှိပြီး၊ in put မှာ 650 rpm နဲ့ out put 550 rpm ရှိပါတယ်။ အသုံးပြုထားတဲ့ Gears တွေဟာ၊ Parallel Axis Gear အုပ်စုမှ၊ Helical Gears တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ တတ်ဆင်ထားတဲ့ pumps တွေက၊ screw pump တွေ ဖြစ်ပြီး၊ capacity အနေနဲ့ 350 Cu. meter per hour ရှိပါတယ်။
Fig. Helical Gears
Gear တွေကို၊ Parallel Axis Gears, Perpendicular Axis Gears, Crossed Axis Gear နဲ့ Planetary Gear ဆိုပြီး ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ Parallel Axis Gears တွေမှာ Spur Gears, Helical Gears နဲ့ Double Helical or Herringbone Gears တို့ပါဝင်ပါတယ်။
Fig. Parallel Axis Gears
Perpendicular Axis Gears တွေကို၊ ခွဲခြားကြည့်တဲ့အခါ Non Intersecting Perpendicular Axis Gear တွေနဲ့ Intersecting Perpendicular Axis Gears တွေဆိုပြီး၊ တွေ့ရပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် Worm Gears တွေနဲ့ Bevel Gears တွေဟာ Perpendicular Axis Gears အမျိုးအစားတွေဖြစ်ပါတယ်။
Fig. Perpendicular Axis Gears
Fig. Crossed Axis Gears
Fig. Planetary Gears
Gear အသစ်တွေမှာရင်၊ အချိန်ပေးပြီး စောင့်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်။ အသစ်မလဲတော့ပဲ grinding လုပ်ကာ ပြန်သုံးခဲ့ပါတယ်။ ပဲ့ထွက်သွားတဲ့ နေရာတွေမှာ၊ ဖို့ထားတဲ့ အသားဟာ အကြောင်းတစုံကြောင့်၊ ပြန်ပဲ့ထွက် သွားနိုင်တဲ့အတွက်၊ re-built ပြန်မလုပ်တော့ပါဘူး။ ဆိုးဆိုးရွားရွားအနေအထားအထိ၊ ပဲ့ထွက်သွားတဲ့ အခါ၊ gear အသစ်လဲဖို့၊ လိုပါလိမ့်မယ်။ အသစ်ရဖို့၊ အချိန်ပေးပြီး၊ မစောင့်နိုင်ရင်တော့၊ Gear ကို၊ Material analysis လုပ်ကာ၊ material composition အတိုင်း၊ strength တန်ဖိုး အနီးစပ်ဆုံး၊ raw metal ကိုရှာပြီး၊ machine ခုတ်ကာ၊ fabrication လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Fig. Pressure regulating unit
တတ်ဆင်ထားတဲ့ Clutch ကတော့၊ maximum pressure7bar သာရှိတဲ့၊ Control air ကိုသုံးထားတဲ့၊ Clutch ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Control air ကိုတော့ main air vessel မှ၊ maximum pressure 30 bar ရှိတဲ့၊ main air ကို၊ pressure regulating unit တတ်ဆင်ပြီးရယူပါတယ်။
Fig. Element Unit
Fig. RD coupling
Air clutch မှာ၊ ပါဝင်တဲ့အဓိက အစိတ်အပိုင်း (၂) ခုကတော့ Element unit နဲ့ RD coupling လို့ခေါါတဲ့၊ Reduction coupling တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ RD coupling ဟာ၊ primer mover ရဲ့ out put shaft မှာ၊ direct coupling အနေနဲ့ တတ်ဆင်ထားတဲ့၊ unit ဖြစ်ပါတယ်။ ‘RD’ coupling ကို၊ အတွင်းမှာ synthetic rubber ဖြစ်တဲ့၊ neoprene နဲ့ ပြုလုပ်ထားပြီး၊ အပေါါမှ metal drum နဲ့ အုပ်ထားတဲ့အတွက်၊ torsional vibration ကိုခံနိုင်ရည် ရှိပါတယ်။
Transmission gear box ရဲ့ input shaft မှာတော့၊ element unit ကို၊ direct coupling အနေနဲ့ တတ်ဆင်ထား ပါတယ်။ အလားတူ transmission gear box ရဲ့ out put shaft မှာ၊ RD coupling ကို တတ်ဆင်ထားပြီး၊ pumps တွေရဲ့ input လို့ခေါါတဲ့၊ driven shaft မှာ element unit ကို၊ direct coupling အနေနဲ့တတ်ဆင်ထား ပါတယ်။
Fig. Element unit - neoprene cord actuating tube and fraction pads
Element unit ရဲ့အတွင်းဖက်မှာ၊ fraction padsတွေကို၊ ထည့်သွင်းတတ်ဆင်ထားပါတယ်။ fraction pads တွေ ရဲ့အပေါါမှာတော့၊ neoprene cord actuating tube ကိုတတ်ဆင်ထားပြီး၊ cord actuating tube ကို၊ metal housing drum နဲ့အပေါါမှ အုပ်ထားပါတယ်။ Air regulating unit မှ၊ maximum pressure7bar ခန့်ရှိတဲ့၊ pressurized air ကို၊ neoprene cord actuating tube အတွင်းသို့၊ ပေးသွင်း လိုက်တဲ့အခါ၊ tube ဟာ၊ expand ကားသွားပြီး၊ fraction pads တွေကို RD coupling surface ဖက်သို့ တွန်းထုတ်ပါတယ်။ fraction pads တွေ RD coupling နဲ့ ကပ်သွားတဲ့အခါ၊ transmission gear box ရဲ့ input shaft ဟာ၊ စတင်လည်ပတ် ပါတယ်။
Fig. Rotor seal
Pressurized air ကို၊ element unit အတွင်းသို့ပေးသွင်းတဲ့အခါ၊ gear box shaft ရဲ့ element unit တတ်ဆင် ထားခြင်း မရှိတဲ့ shaft ဖက်အခြမ်း၊ တနည်းအားဖြင့် non-driven end မှာတတ်ဆင်ထားတဲ့ rotor seal မှတဆင့်ပေးသွင်းပါတယ်။ ball bearing ထည့်သွင်းတတ်ဆင်ထားတဲ့အတွက်၊ rotor seal ရဲ့ အတွင်းဖက် အစိတ်အပိုင်းတွေသာ၊ shaft နဲ့ အတူလိုက်ပါလည်ပတ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ အပြင် အစိတ်အပိုင်း ကတော့ လည်ပတ်နေခြင်းမရှိတဲ့အတွက်၊ stationary unit အနေနဲ့ Air regulating unit မှ၊ pressurized air ကို တိုက်ရိုက်ပေးသွင်းနိုင်ပါတယ်။
shaft မှာ air passage ထည့်သွင်းထားတဲ့ အတွက်၊ non-driven end မှတဆင့် ဝင်လာတဲ့ pressurized air ဟာ၊ driven end ဖက်မှ၊ Element unit ရဲ့ metal housing drum သို့ပေးသွင်းပါတယ်။ metal housing drum ဟာ pressurized air ကို၊ cord actuating tube အတွင်း၊ ဝင်ရောက်စေခြင်းကြောင့် tube ဟာ၊ expand ကားသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Air clutch တွေကို၊ transmission gear box နဲ့တွဲသုံးတဲ့၊ Generator နဲ့ Pumps တွေမှာသာမက၊ Can Making Process, Metal Forming Process, Rubber Processing, Commercial Laundry, Oil Field, Tire Building နဲ့ Paper Mill စတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာပါအသုံးပြုကြပါတယ်။ RD coupling နဲ့ Element ဟာ synthetic rubber ဖြစ်တဲ့၊ neoprene နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့အတွက်၊ torsional vibration ကို ခံနိုင်ရည်ရှိ သလို၊ တော်ရုံတန်ရုံ mis-alignment ဖြစ်ရုံနဲ့၊ မပျက်စီးနိုင်တာ၊ တွေ့ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် synthetic rubber ကိုသုံးထားတဲ့အတွက်၊ သက်တမ်းအားဖြင့် အများဆုံး (၅) နှစ်ခံသာခံပြီး၊ RD coupling ကွဲအက်တတ်သလို၊ cord actuating tube လည်း ကွဲအက်တတ်တာကို၊ တွေ့ရပါတယ်။ အကယ်၍ အကြောင်းတစုံတခုကြောင့် synthetic rubber ကွဲအက်တဲ့အခါ၊ Clutch ကိုအသုံးမပြုပဲ၊ direct coupling အနေနဲ့ တိုက်ရိုက်အသုံးပြုနိုင်ဖို့၊ fitting plate တွေထည့်သွင်းတတ်ဆင်ထားလေ့ ရှိပါတယ်။ Element unit ကို၊ သက်တမ်းစေ့ အပြင် နှစ်အနည်းငယ်ပိုကာ၊ သုံးချင်ရင်တော့ pressurized air ကို၊ maximum7bar အထိမသုံးပဲ၊ 4. 8 ~ 5.6bar လောက်မှာ regulating unit မှ၊ maintain လုပ်ကာ အသုံးပြုပါလို့၊ အကြံပေးပါရစေ ခင်ဗျား။
Credit to : ကိုထွန်း, ကိုပေါတာလူး
Image credit to : http://www.rikind.com/, http://hfoplant.blogspot.com/, http://www.maritime.org/, http://www.macequipment.com/
Posted by ဒူဒူကြီး at 05:58 No comments:
Crane တွေအကြောင်းပြောကျမယ် - Tower Crane/ Assisted erect type
Crane တွေအကြောင်းပြောကျမယ် ဆိုပြီးရေးခဲ့တဲ့၊ Overhead hoist crane အကြောင်းလေးကို၊ ဒီနေရာမှာ ပြန်ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
Tower crane တွေကို၊ Self erect tower crane နဲ့ Assisted erect tower crane ဆိုပြီး၊ တွေ့ရပါတယ်။ tower crane (၂) မျိုးထဲက Assisted erect tower crane အကြောင်းလေးကို၊ ကြားဖူးသလောက်ပြောပါ ရစေ။ Assisted erect tower crane ကတော့ jib ကို luffing အတင်အချလုပ်တဲ့ crane မျိုး မဟုတ်ပဲ gantry crane တွေလို jib မှာ trolley တတ်ထားပြီး၊ trolley ဟာ horizontal ရေပြင်ညီ တလျှောက် အလျှားလိုက်ရွှေ့လျားကာ၊ " ဝန် " load ကို၊ အတင်အချ lifting ပြုလုပ်ပေးတဲ့ crane မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
Assisted erect tower crane တွေကိုအထပ်မြင့်အဆောက်အဦတွေတည်ဆောက်တဲ့အခါ၊ concrete slabs တွေ၊ steel structures တွေ၊ bulk sand bags တွေနဲ့ machinery equipment တွေဖြစ်တဲ့ power generators တွေ နဲ့ cement mixing machines တွေလို heavy building materials တွေကို "မ" ယူဖို့၊ အသုံးပြုပါသတဲ့။ tower crane တွေကို အဆောက်အဦရဲ့ အပေါါ ဒါမှမဟုတ် ဘေးမှာတည်ဆောက် ထားလေ့ရှိပါတယ်။
အပေါါမှာ Assisted erect tower crane တလက်တတ်ဆင်ပုံကို၊ အဆင့်လေးတွေခွဲပြီး၊ ဖော်ပြထားပါ တယ်။ tower crane တွေကို fixed unit နဲ့ moving unit ဆိုပြီး၊ (၂) ပိုင်းခွဲနိုင်ပါသတဲ့။ fixed unit မှာ base, mast သို့မဟုတ် tower ဆိုပြီး (၂) ပိုင်းပါရှိပါတယ်။
Fig. Slewing unit
Base ဟာအရေးကြီးတဲ့ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီး၊ concrete pad မှာ bolted အနေနဲ့ အသေထိုင်ထားတဲ့ steel structure ဖြစ်ပါတယ်။ base ရဲ့၊ အပေါါမှာတော့ mast mast သို့မဟုတ် tower ဆိုတဲ့ steel structure အပိုင်းရှိပြီး၊ elevator အတက် အဆင်း လုပ်နိုင်ဖို့ guard rails တွေနဲ့ guide rails တွေကိုတတ်ဆင်ထား ပါတယ်။ elevator ဓါတ်လှေကားကိုတော့ operator နဲ့ maintenance technician တွေ အတက်အဆင်း လုပ်တဲ့နေရာမှာ အသုံးပြုပါတယ်။
Moving unit ဟာ fixed unit ပေါါမှာထိုင်ထားတဲ့ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီး slewing unit, long horizontal jib, machine house နဲ့ operator cabin တို့ပါဝင် ပါတယ်။ slewing unit မှာ huge gear တွေနဲ့ motor တွေပါဝင်ပြီး 360ိလည်ပတ်နိုင်တဲ့ unit ဖြစ်ပါ သတဲ့။ long horizontal jib ကို “working arm” အနေနဲ့ ခေါါဆိုနိုင်သလို၊ jib မှာ trolley ကိုတတ်ထားပါတယ်။ trolley ဟာ horizontal ရေပြင်ညီ တလျှောက် အလျှားလိုက်ရွှေ့လျားကာ၊ " ဝန် " load ကို အတင် အချ lifting ပြုလုပ်ပေးပါသတဲ့။
Machine house ဟာ crane center ရဲ့အနောက်ဖက်မှာရှိပါသတဲ့။ jib ပေါါမှာ horizontally တတ်ဆင် ထားတာ ဖြစ်ပြီး၊ machine house ထဲမှာ crane motor တွေ၊ winches တွေနဲ့ crane ကို control လုပ်ပေးတဲ့၊ electronic components တွေ အပါအဝင် safety devices တွေတတ်ဆင်ထား ပါတယ်။ machine house ရဲနောက်မှာတော့ huge concrete counterweights အတုံးတွေကိုတတ်ဆင်ထားပြီး၊ အဲဒီ counterweights တုံးတွေက load ကိုမတဲ့အခါ၊ jib ကို balance ဖြစ်စေပါတယ်။ operator cabin ဟာ crane ရဲ့ slewing arrangements နဲ့ အတူ တတ်ဆင်ထားတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပြီး၊ jib လည်ပတ်ရာအတိုင်း လိုက်ပါ လည်ပတ်နေမယ့် အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Assisted erect tower crane တွေဟာ သဘေ်ာကျင်းတွေ၊ ဆိပ်ကမ်းတွေနဲ့ သဘေ်ာတွေပေါါမှာ တတ်ဆင် ထားတဲ့၊ gantry crane တွေ၊ jumbo crane တွေလို၊ တန်ချိန် အများကြီး မ "မ" နိုင်ပါဘူးတဲ့။ tower crane တလက်ရဲ့ load lifting capacity ဟာ၊ crane မှာတတ်ဆင်ထားတဲ့ components တွေရဲ့ weight နဲ့ ဆက်နွယ်နေ ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် tower crane ထိုင်ထားတဲ့ base ပေါါမှာလည်းမူတည်ပါသတဲ့။ supporting မပါပဲ base ပေါါမှာထိုင်ထားတဲ့ tower crane တလက်ရဲ့ maximum height ဟာ မီတာ ၈၀ သို့မဟုတ် ၂၆၅ ပေ ရှိပါတယ်။
Maximum height မီတာ ၈၀ မှာ၊ tower crane တလက်ရဲ့ maximum out reach ဟာ မီတာ ၇၀ ရှိပါတယ်။ maximum outreach ဆိုတာ၊ jib ဟာ 360ိslewing လည်ပတ်ရင်း၊ load ကို horizontally ပို့ပေးနိုင်မယ့်၊ အကွာအဝေးဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ maximum lifting power ဟာ 19.8 tons သို့မဟုတ် 18 metric tons ဖြစ်ပြီး၊ တတ်ဆင်ထားတဲ့ counter weights တွေရဲ့ အလေးချိန်က 20 tons ရှိပါတယ်။
Crane ရဲ့အမြင့်ဟာ မီတာ ၈၀ သို့မဟုတ် ၂၆၅ ပေထက်ကျော်ရင်တော့ sturdy support တွေနဲ့ ထိမ်းပေး ဖို့ လိုအပ်ပါသတဲ့။ maximum lifting capacity ဟာ 18 metric tons ဆိုပေမယ့် crane center နဲ့ "မ" တင်မယ့် load ဟာဝေးလေ lifting capacity ကျဆင်းလေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်မို့ load ကို "မ" တင်တဲ့ အခါ crane center နဲ့ အနီးဆုံး တနည်းအားဖြင့် jib center ကနေ "မ" တင်တာဟာ အကောင်းဆုံးလို့ သိရပါတယ်။
Maximum lifting capacity ကို maximum lifting power အနေနဲ့ဖော်ပြကြပါတယ်။ tower crane တွေ ရဲ့ maximum lifting power ဟာ 300 tones-meter ရှိတယ်လို့ဖော်ပြလေ့ရှိပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် load limitation ဖြစ်ပါသတဲ့။ 10 tons ရှိတဲ့ load ကို crane center မှ 30 meter အကွာအဝေး ကနေ "မ" တင်နိုင်တယ် လို့ဖော်ပြထားတာ ဖြစ်ပါသတဲ့။
Fig. hoisting motor
Fig. slewing gear
Assisted erect tower crane တလက်မှာပါရှိရမယ့် basic safety (၂) ခုကတော့ maximum load limit နဲ့ load movement တို့ဖြစ်ပြီး electrically operated limit switches တွေဖြစ်ပါတယ်။ maximum load limit ကတော့ 18 tons ထက်ကျော်ပြီး "မ" တဲ့အခါ cable strain ကတဆင့် limit switch ကို activated ဖြစ်စေ ပြီး၊ hoisting motor ကို trip ဖြစ်စေတဲ့အပြင်၊ audible and visual alarms တွေအနေနဲ့ အချက်ပေးပါတယ်။ load movement limit ကိုတော့ jib မှာတတ် ဆင် ထားပါတယ်။ load-moment (tonne-meter) ဟာ မူလသတ်မှတ်ထားတဲ့ limit ထက်ကျော်ပြီး limit switch ကို သွားထိတဲ့ အခါ၊ hoisting motor နဲ့ traversing motor တို့ကို trip ဖြစ်စေပါတယ်။
Fig. Erection sequence
Assisted erect tower crane တွေမှာ erection sequence ဟာအရေးကြီးပါတယ်။ crane ကို စတတ်ဆင် ကတည်းက structure ပိုင်းကို စနစ်တကျတွက်ချက်ပြီး erection sequence အတိုင်းတတ်ဆင်ရပါသတဲ့။ erection နဲ့ load distribution ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကို တွက်ချက်ကာ program ရေးသားထားပြီး၊ မောင်းနှင် စဉ်မှာ stress နဲ့ အခြား abnormalities အခြေအနေတွေကို load movement calculation အနေနဲ့ အသိပေးဖော်ပြပါတယ်။
Image credit to :www.heightec.com, www.centralplainscranes.com, http://www.knfcanada.com, http://www.construction-machine.org, http://www2.schneider-electric.com
Posted by ဒူဒူကြီး at 03:062comments:
Labels: Crane တွေအကြောင်းပြောကျမယ်
"Class Change သို့မဟုတ် Classification Society အဖွ...
BNWAS ဆိုတဲ့၊ Bridge Navigational Watch Alarm Syst...
Workplace Safety & Health (WSH) Manual for the Mar...
Crane တွေအကြောင်းပြောကျမယ် - Tower Crane/ Assisted...